२०२० मा सर्वश्रेष्ठ क्रस-प्लेटफर्म खेलहरू - गेमि।
खेल उद्योग प्रत्येक दिन बढ्दै छ र आउने दशकहरु मा खेल को अनुभव क्रान्ति गर्न बाध्य छ। खेलहरू जस्तै PUBG, FORTNITE, CALL OF DUTY, इत्यादि, आजका युवाहरूको ध्यान खिचेको छ। गेमरहरू खेल खेल उद्योग मा सफल क्यारियर छ, यी लोकप्रिय खेल को लागी धन्यवाद।
आज एक उभरती र ग्राउन्डब्रेकिंग क्षेत्र को रूप मा, आधुनिक गेमि of को एक प्रशंसनीय पक्ष क्रस-प्लेटफर्म गेमिंग सुविधा हो। क्रस-प्लेटफर्म खेलहरू Xbox, PC, PS4, इत्यादि जस्ता विभिन्न गेमि systems प्रणालीहरूमा अनलाइन पहुँच गर्न सजिलो हुन्छ। यी खेलहरू प्लेटफर्म-विशेष हुँदैनन्।
यो कुनै पनि सीमा वा सीमाहरू बिना कुनै पनि प्लेटफर्ममा चल्न सक्छ। समान खेलहरू विभिन्न प्लेटफार्महरूमा खेल्न योग्य छन्।
लोकप्रिय क्रस-प्लेटफर्म खेलहरूको सूची:
क्रस-प्लेटफर्म गेमहरूले गेमरहरूलाई सजिलैसँग विभिन्न प्लेटफर्महरूमा खेलहरू सक्षम गर्दछ। बहु उपकरणहरूको स्क्रीन आकार भन्दा बाहेक, खेल अनुभवमा धेरै भिन्नता छैन।
उदाहरणको लागि, यदि कोहीले PS4 मा कल अफ ड्युटी खेल्दै छ भने, तिनीहरू उही खेल खेल्न सक्छन् अरू कसैसँग फरक प्लेटफर्म भएको।क्रस-प्लेटफर्म गेमहरूले विगत केही वर्षहरूमा ठूलो लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ किनकि यस सुविधाले अधिक बहुमुखी प्रतिभाको अनुमति दिन्छ र धेरै गेमप्ले विकल्पहरू प्रदान गर्दछ।केहि लोकप्रिय क्रस-प्लेटफर्म खेलहरू समावेश:
कर्तव्य को कल
युद्ध4को Gears
हेलो युद्धहरु २
के क्रस प्लेटफार्महरू आधुनिक गेमि inमा उपलब्ध छन्?
हामी सबै गेमि love मनपराउँदछौं जब हामी बहु सामग्रीहरु का आनंद ले रहे हैं। साथीहरू र परिवारसँग खेल खेल्न सधैं रमाईलो हुन्छ। यो सँगै खेल्न गाह्रो हुन सक्छ जब तपाइँको सबै भन्दा राम्रो साथीसँग फरक मेशिन छ। यसले तपाईंलाई मल्टिप्लेयर खेलहरूमा समस्याहरूको टन दिन्छ। आज हामी जवाफ दिन कोशिस गर्नेछौं यदि क्रस-प्लेटफर्म गेमि modern आधुनिक उपकरणहरूमा उपलब्ध छ। यस गाईडमा, हामीसँग आजको बजारमा खेलहरूको लागि धेरै विकल्पहरू छन्। हालको शीर्षकहरूमा त्रुटिहीन सटीक छ। २०२० मा केहि लोकप्रिय क्रस-प्लेटफर्म खेलहरूमा एक नजर राख्दछौं।
यो गेमि forको लागि सबैभन्दा लोकप्रिय क्रस-प्लेटफर्महरू मध्ये एक हो। Xbox जुनसुकै ठाउँमा, जुनसुकै ठाउँमा र कुनै पनि समयमा गेमि gको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, यसको क्रस-प्ले अनुकूलतालाई धन्यवाद। Xbox अब PS4, पीसी, निन्टेन्डो स्विच, आदि संग लिंक गर्न पूर्व हो। Xbox प्लेटफर्ममा खेल्न सकिन्छ र PC सँग जोडिएको केहि खेलहरू समावेश:
पीसी भनेको व्यक्तिगत कम्प्युटर हो। पीसी यथोचित भिडियो गेमहरू खेल्नको लागि सब भन्दा ठूलो प्लेटफर्म हो जसलाई कच्चा हर्स पावरको उच्च मात्रा आवश्यक पर्दछ। गेमि PC पीसीहरू लोकप्रिय उपकरणहरू हुन् जसले हामीलाई प्रदर्शन प्राप्त गर्न सक्षम गर्दछ जुन गेमप्लेका लागि उपयुक्त छ। पीसीहरू धेरै लोकप्रिय छन किनकि उनीहरूसँग गेम कन्सोल भन्दा पनि धेरै खेल विकल्पहरू छन्।
केहि लोकप्रिय पीसी खेलहरू:
यो प्ले स्टेशन श्रृंखलाको th औं पुस्ताको घर गेमि con कन्सोल हो। यो कन्सोल एक गेमि PC पीसी जस्तै छ तर अधिक कम खर्च। केहि लोकप्रिय PS4 क्रस-प्लेटफार्म खेलहरू समावेश:
नश्वर लडाई ११ अन्तिम
कुनै मानिसको आकाश छैन
PS5 एक घर भिडियो कन्सोल हो जोको विकास क्रेडिट सोनी अन्तर्क्रियात्मक वातावरणमा जान्छ। PS5 र Xbox श्रृंखला X २०२० को सब भन्दा महत्वपूर्ण गेमिंग घटनाहरू हुन्। PS5 र Xbox श्रृंखला X मा प्रमुख क्रस-प्लेटफर्म खेलहरू समावेश:
Fortnite:यो PS5 र Xbox श्रृंखला X को लागि उपलब्ध सबैभन्दा ठूलो क्रस-प्लेटफर्म खेल हो।
चावलरी २:यो क्रस-प्लेटफर्म खेल PS5, PS4, Xbox, आदि जस्ता सबै प्रमुख प्लेटफर्महरूमा सजिलैसँग काम गर्दछ।
मार्वल एभेन्जरहरू:यो एक सबैभन्दा लोकप्रिय क्रस-प्लेटफर्म खेलहरू उपलब्ध छ। खेलले PS4 र PS5 प्लेयरहरू सँगै खेल्न अनुमति दिन्छ र Xbox एक र Xbox श्रृंखला X प्लेयरहरू सँगै खेल्नको लागि।
गँड्यौला रम्बल:यो एक लोकप्रिय खेल हो जुन PS5, PS4, र पीसी द्वारा समर्थित छ।
सब भन्दा प्रचलन तुलना: PS5 vs Xbox श्रृंखला X - कुन कन्सोल उत्तम छ?
सबै क्रस प्लेटफार्म खेलहरू जुन प्रत्येक खेलाडीले जाँच गर्नु पर्छ।
गेमि बिना साथीहरू बिना रमाईलो हुँदैन। वर्ष २०२० सबै जडानको बारेमा हो, र हामी यो घरबाट रमाइलो गर्दैछौं। गेमिले आजको संसारमा जडानको सबैभन्दा सजिलो विधि प्रदान गर्दछ। यस सेक्सनमा, हामी सबैभन्दा लोकप्रिय क्रस-प्लेटफर्म मल्टिप्लेयर विकल्पहरूमा एक नजर राख्नेछौं। यसले तपाईंलाई कुनै पनि समस्या बिना सजिलैसँग सामग्री प्ले गर्न मद्दत गर्दछ। प्रयोगकर्ताहरू उनीहरूको उपकरणहरूमा स्ट्रिम सुरू गर्न सक्दछन्। यो मद्दत गर्दछ यदि तपाइँसँग उत्तम अनुभवको लागि द्रुत इन्टरनेट जडान छ। यहाँ केहि क्रस-प्लेटफर्म गेमहरू छन् जुन तपाईंले चेक आउट गर्नुपर्दछ।
फोर्टनाइट आज उपलब्ध सबैभन्दा लोकप्रिय क्रस-प्ले भिडियो खेलहरू मध्ये एक हो।यो सिमलेस र चिल्लो मल्टिप्लेयर गेमिंग अनलाइन प्रस्ताव गर्दछ। एपिक खेलहरू यो शानदार खेलका निर्माताहरू हुन्। यसमा उपलब्ध अन्य तीन गेम मोडहरूमा पार्टी रोयाल, सेभ द वर्ल्ड, र क्रिएटिभ समावेश छ। यो हाल Xbox वन, PS4, PC, androids, र निन्टेन्डो स्विच को मालिकहरु को लागी उपलब्ध छ।
२. कर्तव्यको कल: आधुनिक युद्ध
यी दुई सबैभन्दा लोकप्रिय कल अफ ड्युटी खेलहरू हुन्: 'सीओडी आधुनिक युद्ध' र 'वारजोन', जुन पूर्वको लडाई शाही घटक हो। यी दुई भिडियो गेमहरू पनि लोकप्रिय छन् किनकि उनीहरूले माथि उल्लिखित शीर्षकहरू बीच क्रस-प्लेटफर्म प्रगति प्रदान गर्दछ। उनीहरूसँग Xbox One, PS4, र PC मा सक्रिय खेल समर्थन छ।
आधुनिक युद्धका लागि उत्तम सीओडी माउस
SMITE यसको चरित्र रोस्टरको लागि प्रसिद्ध छ। यसले धेरै गेमि। मोडहरू प्रदान गर्दछ। यो Xbox One, PS4, PC हरू र निन्टेन्डो स्विचमा क्रस प्ले गर्न सकिन्छ।
Minecraft सबैभन्दा लोकप्रिय स्यान्डबक्स खेल हो जुन एक अद्वितीय अनुभव प्रदान गर्दछ। यो Mojang स्टूडियो को एक नवीन विकास हो र Xbox एक, PS4, पीसी (मात्र विन्डोज), android, र निन्टेन्डो स्विच मा चलाउन योग्य छ। माइक्रोसफ्ट हाल यो शानदार खेल स्टुडियो को मालिक हो।
R. रोकेट लीग
रकेट लीग सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी खेल हो। साइकोनिक्स लुभावनी तर अझै सीधा खेलको निर्माता हो।यो यसको अद्वितीय गेमप्लेका कारण लोकप्रिय छ। यसको विशाल लोकप्रियताको कारण, नयाँ अपडेटले Xbox वन, निन्टेन्डो स्विच, पीसी, र PS4 बीचमा क्रस-प्लेटफर्म प्रगति सुविधा प्रस्तुत गर्दछ।
यी केवल केही क्रस-प्लेटफर्म खेलहरू हुन् जुन तपाईले प्रत्येक दिन आफ्नो खेल अनुभव मार्फत मजा लिन सक्नुहुन्छ। रकेट लीगले तपाईंको फुटबल गेमप्लेलाई परिवर्तन गर्दछ र तपाईंलाई शानदार कनेक्टिभ अनुभव प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
क्रस-प्लेटफर्म खेलहरूको सीमितता:
प्रत्येक सिक्काका दुई पाटा हुन्छन्। जबकि क्रस-प्लेटफर्म गेमहरूले गेमि culture संस्कृतिलाई प्रमोट गरेको छ, तिनीहरूको सीमितताहरू छन्, जस्तै:
१ लागत लागत
तपाइँको खेललाई बिभिन्न प्रणालीहरूमा पोर्ट गर्न यसले धेरै खर्च गर्दछ र यो सुचारु छ कि यो सुचारु रूपमा चलाउँछ।
२. कोडिंग र विकास
क्रस-प्लेटफर्म खेलहरूको सफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सजिलो छैन। तिनीहरू प्रोग्राम हुनुपर्दछ र कोड हुनुपर्दछ कि तिनीहरू सजिलैसँग धेरै प्लेटफर्महरूमा दौडन सक्छन्। यस कारकका कारण, धेरै कम्पनीहरू क्रस-प्लेटफर्म खेलहरूको विकासको दिशामा अघि बढिरहेका छैनन्।
२०२० मा क्रस-प्लेटफर्म खेलहरू सबैको लागि आवाश्यक हुन्छ। हामी प्रत्येक दिन नयाँ सीमानाहरू तोड्ने तर्फ बढिरहेका छौं। हामी यी खेलहरूको माध्यमबाट एक उत्कृष्ट गेमप्ले अनुभवको मजा लिनेछौं। हाम्रो मार्गनिर्देशनले तपाईंलाई बजारमा बहु उपलब्ध विकल्पहरू प्रदान गर्न प्रयास गर्दछ। आज उनीहरूलाई प्रयोग गरी हेर्नुहोस् र तपाईंको खेल साथीहरूसँग अनलाइन समय बिताउनुहोस्।
१ Best सर्वश्रेष्ठ खेलहरू जस्तै रोब्लक्स (२०२०)
अमेजन फायरस्टिक कसरी सेट अप गर्ने?
नि: शुल्क अनलाइन फिल्महरू hd हेर्नुहोस्
गोफन टिभी बनाम युट्युब टिभी च्यानल लाइनअप
अमेजन उपहार कार्डहरूका लागि खेलहरू खेल्नुहोस्
म्याकमा नेटफ्लिक्स अफलाईन हेर्दै
म कसरी फ्रि अमेजन उपहार कार्डहरू पाउन सक्छु